ဘလော့ခ်အလွမ်း | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
January 30, 2009, 3:18 am
ပြန်ရေးနေပြီဆိုတာတွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ် မလင်းလက်။
ဒီစီးပွားပျက်ကပ်ကို ကျနော်တို့တွေ လွန်မြောက်နိုင်တဲ့အခါကျရင်တော့ ကမ္ဘာ့လူသားတွေမှာ တစုံတခုသော သင်ခန်းစာကို ရလိုက်ကြပြီး အနာဂတ်မှာ အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်စေမယ့် ဆန္ဒတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ကောင်းရဲ့လို့ အောက်မေ့မျှော်လင့်ရတာပဲ။
Comment by Ko Paw January 30, 2009 @ 11:29 am
၀တ္ထုလေးတွေ ရေးဦးလေ ညီမလေး
Comment by pandora January 30, 2009 @ 12:58 pm
လမ်းမသစ်ပေါ်မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမရေ။ ပို့ စ်အသစ်တွေလည်းမျှော်နေမယ်။
Comment by ကောင်းကင်ကို January 30, 2009 @ 2:11 pm
Nyi Ma yay,
Long time no see naw!
Comment by wai February 2, 2009 @ 8:59 am
ပြန်ရေးပြီပေါ့ ညီမလေး။ သာယာချမ်းမြေ့ပါစေ..
Comment by Mr.Guiter February 7, 2009 @ 11:40 am